रूपान्तरित सामग्री बनाउन7ईकामर्स सुझावहरू Martech Zone
रूपान्तरण गर्ने सामग्री सिर्जना गर्नका लागि E ईकामर्स सुझावहरू
बिहीबार, जुलाई 19, 2018 बुधबार, जुलाई 18, 2018 ग्रेस कार्टर
सामग्री सिर्जना गरेर व्यक्तिहरू चाखलाग्दो र सान्दर्भिक फेला पार्न, तपाईं गुगलको खोजी परिणामहरूमा तपाईंको साइटको दृश्यता बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्नाले तपाईंलाई केहि रूपान्तरणहरूको लागि सेट अप गर्न मद्दत गर्दछ। तर केवल व्यक्ति तपाईको सामान हेरिरहेकोले ग्यारेन्टी गर्दैन कि उनीहरुले कार्य गरिरहेका छन् र तपाईलाई रूपान्तरण दिदैछन्। रूपान्तरण गर्ने सामग्री सिर्जना गर्न यी सात इ-कमर्स सुझावहरूको पालना गर्नुहोस्।
रूपान्तरण गर्ने सामग्री सिर्जना गर्न तपाईको ग्राहक जस्तो कस्तो छ भन्ने बारे राम्रो विचार हुनु आवश्यक छ। व्यक्तिमा केहि डेमोग्राफिक डेटा स by्कलन गरेर सुरू गर्नुहोस् जुन तपाईंको पृष्ठ भ्रमण गर्छन्, तपाईंको ईमेलहरूमा सदस्यता लिनुहोस्, र सोशल मीडियामा तपाईंलाई पछ्याउनुहोस्। तिनीहरूको उमेर, लि gender्ग, शिक्षा, र आयमा डाटा फेला पार्न एनालिटिक्स प्रयोग गर्नुहोस्।
Google विश्लेषण तिनीहरू अनलाइन हुँदा तिनीहरूमा के रूचि हुन्छ तपाईंलाई जानकारी दिन सक्दछन्। तपाइँ ट्विटर एनालिटिक्स र फेसबुक पृष्ठ अन्तर्दृष्टि तपाइँको सामाजिक मिडिया अनुयायीहरू के हुन् भनेर फेला पार्न पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको उत्पादनको बारेमा ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया अनुरोध गर्नुहोस्, उनीहरूको सब भन्दा उल्लेखनीय आवश्यकताहरू के हुन्, र तपाईं उनीहरूको समस्याहरूमा कसरी तिनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
एकचोटि तपाईंले पर्याप्त प्रतिक्रिया र डेमोग्राफिक डाटा जम्मा गर्नुभयो तपाईं एक क्रेता व्यक्तित्व सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। एक क्रेता व्यक्तित्व तपाईंको आदर्श ग्राहकको नमूना हो, उनीहरूको संघर्ष, प्रेरणा र जानकारी स्रोतहरूको वर्णन। ड्यानी नाजेरा, सामग्री बजारमा राज्य लेखन.
तपाईंको कल टू एक्शन
तपाईं त्यो सबै महत्त्वपूर्ण लेख्नु अघि CTA, तपाइँले निर्णय गर्नु पर्छ कि तपाइँ कसरी रूपान्तरण परिभाषित गर्नुहुन्छ। तपाईको ब्यापार लक्ष्य के हो? के तपाईं व्यक्तिले छुटको फाइदा लिन चाहनुहुन्छ? तपाईको इ-मेल सूचीमा सहभागी हुनुहोस्? एउटा प्रतियोगिता प्रविष्ट गर्नुहोस्?
उत्पादन वा सेवा जुन तपाईं बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंको सीटीए निर्धारण गर्दछ। एकचोटि तपाईंले यो लक्ष्य निर्धारण गर्नुभयो, तपाईंले आफ्नो मार्केटिंग रणनीतिको लागि जग बसाल्नुभयो। क्लिफ्टन ग्रिफिस, सामग्री लेखक सिम्पलग्राड.
एकचोटि तपाईंले आफ्नो लक्षित दर्शकहरू निर्धारण गर्नुभयो र एक क्रेता व्यक्तित्व सिर्जना गर्नुभयो, तपाईं आफ्नो सामग्रीको लागि उपयुक्त शीर्षक छनौट गर्न तयार हुनुहुन्छ। ठोस शीर्षकहरूको साथ आउने एउटा राम्रो तरिका भनेको समावेश गर्नुहोस्, वा कम्तिमा लुक, तपाईंको उत्पादनसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमा छलफल गर्ने अनलाइन समुदायहरूमा।
फेसबुक, लिंक्डइन, गुगल + र रेडडिट सबै राम्रा ठाउँहरू छन् हेर्नका लागि। तपाईंले बिक्री गरिरहनुभएको उत्पादनको बारेमा छलफल गर्दै थ्रेडहरू फेला पार्न खोजी कार्यको प्रयोग गर्नुहोस्, र मानिसहरूले के कुरा गर्दैछन् हेर्नुहोस्। विषय लोकप्रिय छ भनेर निश्चित गर्न केवल यसलाई अनुसन्धान गर्नुहोस् Ahrefs कीवर्ड एक्सप्लोरर वा समान उपकरणहरू।
तपाइँको शीर्षकहरूको व्यवसाय मूल्य
ठीक छ त्यसैले तपाईले सम्भावित शीर्षक विचारहरूको सुन्दर लामो सूची कम्पाइल गर्नुभयो, तर चिन्ता नलिनुहोस्, हामी यसलाई संकुचित गर्न लाग्यौं। यो सूचीलाई उनीहरूको व्यावासायिक मूल्य सम्बन्धी सब भन्दा व्यवहार्य विषयहरूमा घटाउने समय हो। तपाईको CTA विषयको व्यवसाय मूल्य सम्भाव्य निर्धारणका लागि मार्गदर्शक प्रकाश हुनेछ।
तपाइँको CTA का साथ कति पign्क्तिबद्ध गर्दै तपाइँको सूची अर्डर गर्नुहोस्, र तब शीर्ष विचारहरू लिनुहोस् र बाँकी छोड्नुहोस्। यो नबिर्सनुहोस् कि तपाइँको CTA र सामग्री व्याकरणीय रूप मा सही, प्रुफरीड, र जस्तै सेवाहरु को उपयोग गरेर पॉलिश हुनु पर्छ युकेइराइट्स.
अन्तत: केही सामग्री सिर्जना गर्ने समय आयो। केहि Googling गरेर शुरू गर्नुहोस्, कस्तो प्रकारको सामग्री तपाईंको छनौट शीर्षकको लागि आउँदछन् हेर्नुहोस्, र मूल्या content्कन गर्नुहोस् कि कस्तो प्रकारको सामग्रीले राम्रोसँग काम गर्यो। कार्यक्रम जस्तै सामग्री एक्सप्लोरर तपाइँको विषय मा लेख कुन बारम्बार साझा गरिन्छ, र किन ती लोकप्रिय थिए मा तपाइँलाई केही ठूलो अन्तरदृष्टि दिन सक्नुहुन्छ।
याद राख्नुहोस् कि आकर्षक शीर्षक तपाईको सामग्री हेर्नका लागि नेत्रगोल ल्याउँदछ को एक विशाल हिस्सा हो, त्यसैले तपाइँको शीर्षक एक विचारविमर्श बनाउनुहोस्। सम्मोहक सामग्री लेख्नको लागि ती भावनात्मक मुद्दाहरूमा प्लक गर्नुहोस्।
व्यक्तिले उनीहरूलाई कस्तो लाग्छ आधारितमा खरिद निर्णयहरू गर्छन्, उनीहरू के सोच्छन् भनेर होइन। निबन्ध र मेरो कागज लेख्नुहोस् दुबै राम्रो उदाहरण हो सफलतापूर्वक रूपान्तरण सामग्री प्रयोग गरेर।
जहाँ तपाइँको कल लाई कार्यमा राख्नुहोस्
तपाईंको CTAs सम्मिलित गर्न महत्त्वपूर्ण छ, र हो, जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई राख्नुहुन्छ तपाईंको कुराकानीको सन्दर्भमा धेरै महत्व राख्छ। व्यक्तिले तपाईका लिंकहरू र CTAs जस्ता चीजहरूमा क्लिक गर्ने कारण उनीहरूलाई प्रासंगिक भेटिन्छ। त्यसोभए केवल तिनीहरूलाई कहिँ पनि टाँसिनुहोस्, वा प्रयास गर्नुहोस् र धेरैलाई जाम गर्नुहोस् जुन तपाईं सक्नुहुन्छ एक प्रभावकारी रणनीति होइन।
तपाईंको सामग्री पढ्नुहोस् र CTA मा जोड्नुहोस् जहाँ यो सामग्री छलफल गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ। तपाईं आफ्नो सामान तिर व्यक्ति डो guide्याउन कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ, यसको टाउकोमा कुट्नु हुँदैन। तपाईं विभिन्न प्रकारका सीटीए प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको टेक्स्टमा सिधा घुसाउनुहोस्, निकास ईन्टेन्ट पपअपहरू, र साइडबार स्क्रोल पपअपहरूमा।
आफ्नो लक्ष्यहरु लाई जान्नुहोस् र नतिजा मापन गर्नुहोस्
एक लक्ष्य राख्नुहोस्, र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंलाई थाहा छ तपाईं कसरी सफलता परिभाषित गर्नुहुन्छ, र तपाईंको सफलताको मेट्रिक कस्तो हुनेछ। तपाइँले थाहा पाउनुहुन्न कि तपाइँको रणनीति कती सफल भयो यदि तपाइँ तपाइँका नतीजाहरू मापन गर्नुहुन्न। कति पटक तपाईंको सामग्री साझा गरिएको छ, कति जनाले यसलाई हेरेका छन्, तपाईंको ट्राफिक कहाँबाट आउँदैछ, र तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा तपाईं कति राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस्।
उत्कृष्ट सामग्री को माध्यम बाट तपाईंको ecommerce साइट मा अधिक यातायात प्राप्त एक ठूलो पहिलो चरण हो। तर हामी केवल विजिटर्सको संख्याका हिसाबले सफलता मापन गर्दैनौं; रूपान्तरण वास्तविक लक्ष्य हो। राम्रो सामग्री को लागी मानिसहरु लाई र्याक रूपान्तरण गर्न को लागी आवश्यक छ। तपाईको रूपान्तरण अधिकतम बनाउन यी सात ईकमेन्स सल्लाहहरू पालना गर्नुहोस्!
टैग: सामग्री मार्केटिङरूपान्तरणकन्वर्टिंग सामग्रीइकमर्सecommerce सामग्री
ग्रेस कार्टर एक प्राविधिक लेखक हो Academized र अस्ट्रेलियाई सहयोग सेवाहरू। उनी रूपान्तरण सुधारमा काम गर्दछन् र मार्केटिंग रणनीतिहरू विकास गर्दछन्। साथै, अनुग्रह एक शिक्षक हो मनोविज्ञान असाइनमेन्ट मद्दत शैक्षिक वेबसाइट।
Adobe XD: डिजाईन, प्रोटोटाइप, र Adobe को UX / UI समाधानको साथ साझा गर्नुहोस्
वर्डप्रेस रखरखाव चेकलिस्ट: टिप्स, उपकरण, र उत्तम अभ्यासहरूको अन्तिम सूची